Andrea Andrade – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Tomorrow War (2021) Unicode သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် နာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်မင်းသား "ခရစ်စ်ပရက်"က ဒန်ဖော်စတာအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Tomorrow War ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးထွက်လာပါပြီ. စစ်တပ်ကနေအငြိမ်းစားယူပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ဇီဝဗေဒဆရာလုပ်နေတဲ့ ဒန်တယောက် တစ်နေ့မှာ မိသားစုနဲ့ပါတီလုပ်နေရင်းက အနာဂတ်နောက်နှစ် ၃၀ (၂၀၅၁) ကလူတွေရောက်လာပြီး ဂြိုဟ်သားတွေကိုတူတူလက်တွဲတိုက်ထုတ်ဖို့စစ်ကူခေါ်တဲ့အခါ အချိန်ခရီးသွားနည်းပညာကိုအသုံးချပြီး အနာဂတ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ် ဝိုက်စပိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဂြိုဟ်သားတွေက တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ရှိနေပြီး လူသားမျိူးနွယ်စုဟာလဲ ပျက်သုဉ်းတော့မယ် ဆဲဆဲအန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရပါတယ် ဒန်တို့ ဒီအနာဂတ်စစ်ပွဲမှာ ဂြိုဟ်သားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မလား အနာဂတ်ခရီးသွားတာကကော ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီ ဒီဇာတ်ကားကို အညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ JJ ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi သိပၸံအက္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းေတြႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြအတြက္ နာမည္ႀကီးေဟာလိဝုဒ္မင္းသား "ခရစ္စ္ပရက္"က ဒန္ေဖာ္စတာအျဖစ္ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ The Tomorrow War ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးထြက္လာပါၿပီ. စစ္တပ္ကေနအၿငိမ္းစားယူၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာ ဇီဝေဗဒဆရာလုပ္ေနတဲ့ ဒန္တေယာက္ တစ္ေန႔မွာ မိသားစုနဲ႔ပါတီလုပ္ေနရင္းက အနာဂတ္ေနာက္ႏွစ္ ၃၀ (၂၀၅၁) ကလူေတြေရာက္လာၿပီး ၿဂိဳဟ္သားေတြကိုတူတူလက္တြဲတိုက္ထုတ္ဖို႔စစ္ကူေခၚတဲ့အခါ အခ်ိန္ခရီးသြားနည္းပညာကိုအသုံးခ်ၿပီး အနာဂတ္ကိုသြားခဲ့ပါတယ္ ဝိုက္စပိုက္လို႔ေခၚတဲ့ၿဂိဳဟ္သားေတြက တစ္ကမာၻလုံးအႏွံ႔ရွိေနၿပီး လူသားမ်ိဴးႏြယ္စုဟာလဲ ပ်က္သုဥ္းေတာ့မယ္ ဆဲဆဲအႏၲရာယ္ ...
IMDB: 6.7/10 46k votes
The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) Unicode အက်ဒ် နဲ့ လော်ရိန်း ဝါရန်လင်မယားရဲ့ သဘာဝလွန်အမှုတွေထဲက အဆိုးဆုံးအမှုတစ်ခုကို ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ဂျူးရင်း ၄ ကားမြောက် လာပါပြီ။နိုင်ငံကျော် အာနီ ဂျွန်ဆန်ရဲ့လူသတ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဓားနဲ့ ၂၂ ချက်တိတိထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ အာနီဟာ နတ်ဆိုးပူးကပ်ပြီး လုပ်ခဲ့မိတာဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးမှာထွက်ဆိုလာပါတယ်။ဒီလို လူသတ်မှုမျိုးဟာ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ လောက်ကနေ သေဒဏ်အထိ ချနိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့အပြင် နတ်ဆိုးပူးကပ်မှုဆိုတာ တရားရုံးမှာ သက်သေပြဖို့လည်း မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ဝါရန်လင်မယားဟာ ဘယ်လို နတ်ဆိုးတွေနဲ့ ဘယ်လို သဘာဝလွန်အဖြစ်အျပက်တွေကို ထပ်ပြီးစုံစမ်းရဦးမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် Credit Review ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Hein Htet Aung ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi အက္ဒ္ နဲ႔ ေလာ္ရိန္း ဝါရန္လင္မယားရဲ႕ သဘာဝလြန္အမႈေတြထဲက အဆိုးဆုံးအမႈတစ္ခုကို ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚအေျခခံၿပီး ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ ကြန္ဂ်ဴးရင္း ၄ ကားေျမာက္ လာပါၿပီ။ႏိုင္ငံေက်ာ္ အာနီ ဂြၽန္ဆန္ရဲ႕လူသတ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဓားနဲ႔ ၂၂ ခ်က္တိတိထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ အာနီဟာ နတ္ဆိုးပူးကပ္ၿပီး လုပ္ခဲ့မိတာျဖစ္ေၾကာင္း ...
IMDB: 6.6/10 16897 votes